Imivumbo kunye neebrashi zokubetha kwi 'sol 23' | Izidalwa ezikwi-Intanethi
'ilanga 23' kunye nemfuneko yokusebenzisa ipeyinti eninzi
Ngaphandle kwethiyori yombala kunye nezinye izinto ezintle umntu ekufuneka enazo, isifundo seengcibi zokupenda ziyaqhubeka yazi ukumila kwemivumbo yakhe kunye neebrashi Ukufumanisa ukuba ukuphosa enye kwi-diagonally kwizithunzi ezithile kunokunika ingqiqo enye okanye enye kubunzulu obufuna ukunika.
Umzekelo olungileyo wokuqonda ukubaluleka komgca kunye nendlela enye inikwe kakuhle nge-flick efanelekileyo yesihlahla Ungagcina imizuzu yokukhangela imilo efanelekileyo ngokujonga enye indlela yokufumana iziphumo ezifanayo. 'i-sol 23' nguConrad Jon Godly yanele kuthi ukuba siqonde ukuba sinike njani imilo egqibeleleyo kwincopho yentaba apho uqikelelo luqhele ukuba yinto eqhelekileyo.
UConrad uyichaza ngokugqibeleleyo loo ntaba ngokusebenzisa ipeyinti yeoyile eninzi ukunika iimilo ezifanelekileyo kwezo ngcebiso kunye neempawu. Ekuphela kwento eya kuthi ngokuqinisekileyo ithathe iinyanga ezimbalwa ukuba i-oyile yome. Oko kwathiwa, njengomdla wokuthetha ukuba ezinye iipeyinti zeoyile zithatha iminyaka emininzi ukuba zome ngokupheleleyo.
Esinye sezakhono ekufuneka siphumelele emva kokufaka idyasi yeoyile, kunjalo linda de wome phantse ngokupheleleyo ukufaka enye. Abanye, ngeveki bakulungele ukukwazi ukupeyinta kwakhona, ngelixa abanye abaneentsuku ezimbini ngaphezulu kokwaneleyo. Ngapha koko, kuxhomekeke kwioyile kunye nokuba ubuncinci kangakanani ubume bokuyilinda ukuba yome.
Apha umzobi sebenzisa ipeyinti eninzi ukuvelisa eso siphumo kulwakhiwo olunceda nokuba lubonelele ngesiphumo sombonakalo ovele kwibala. Unayo iwebhusayithi yakho Ukusuka kule khonkco ukufikelela kumzobo wakhe apho adlala khona kakhulu ngemivumbo kunye nokuthungwa njengoko ubona.
Omnye umzobi edlala ngemivumbo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » 'ilanga 23' kunye nemfuneko yokusebenzisa ipeyinti eninzi
Iifcolor ezimnandi zegcisa lomculi waseIndonesia uLuqman Reza Mulyono
Umsebenzi omkhulu wobugcisa bokungalambisi: Inqanawa eyaphukileyo